पारदर्शिता, सुशासन र वित्तीय सचेतना - Karobar National Economic Daily
पारदर्शिता, सुशासन र वित्तीय सचेतना
query_builderDecember 20, 2016 8:58 AM supervisor_accountगजेन्द्र बुढाथोकी visibility1131
वर्तमान संयुक्त सरकार गठन भएको निकै ढिलो समयपछि मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भयो । मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूमध्ये प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सम्पत्ति विवरण अस्वाभाविक देखिएपछि सामाजिक सञ्जालमा उनीप्रति विभिन्न खालका टीकाटिप्पणी हुने क्रम जारी छ ।
मात्र ३ तोला सुन र चितवनमा १० कठ्ठा जमिन सम्पत्ति देखाएका प्रधानमन्त्री दाहालप्रति कटाक्ष गर्दै विपक्षी दल एमालेका भ्रातृ संगठनहरूका तर्फबाट १ रुपैयाँ चन्दासमेत उठाउन थालिएको छ । त्यसको प्रतिरक्षा गर्दै सत्ताधारी दल माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताहरूले ‘विश्वकै सर्वहारा प्रधानमन्त्री’ लाई त्यसो भन्न पाइन्न भन्दै प्रतिपक्षी दलका कार्यकर्ताहरूलाई तिनका नेताका सम्पत्तिको स्रोत देखाउन चुनौती दिँदै लेखिरहेको देखिन्छ ।
१५ लाख रुपैयाँ पर्ने रोलेक्स घडी लगाउने र ‘अदृश्य’ भाडाको घरमा बस्ने प्रधानमन्त्री दाहालप्रति उठेका प्रश्नहरू अस्वाभाविक होइनन् भने माओवादीका कार्यकर्ताहरूले उठाएको प्रतिप्रश्न पनि आधारहीन छैन । भ्रष्टाचार निवारण गर्न र देशभित्र सुशासन कायम गर्नैका लागि सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो, यो केवल कर्मकाण्ड पूरा गर्नका लागि मात्र गरिएको व्यवस्था भने होइन ।
सार्वजनिक पद धारण गर्नेहरूमा केवल प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूमात्र पर्दैनन्, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, विभिन्न आयोगका पदाधिकारीदेखि निजामती कर्मचारीले समेत सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन– २०५९ को दफा ५० मा प्रत्येक सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको सम्पत्तिको अद्यावधिक विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसको प्रस्ट आशय भनेको अस्वाभाविक सम्पत्ति देखियो भने त्यसको छानबिन गर्न सकियोस् भन्ने हो । यदि स्वाभाविक आय, पैत्रिक सम्पत्ति छ भने त्यो लुकाइरहनु पर्दैन । चाहे वर्तमान सरकारमा सामेल भएका मन्त्री हुन् वा विगतमा मन्त्री भएका केही नेताले आफ्नो सम्पत्तिमा देखाएको स्रोतमा श्रीमतीको दाइजो भनेर अथाह सुनचाँदी देखाउने गरेको पाइएको छ ।
विद्यमान सामाजिक व्यवहार सुधार ऐनले दाइजो लिन–दिन नहुने प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ । यस्तो अवस्थामा श्रीमतीको दाइजो भनेर घरजग्गा, सुनचाँदी देखाउनु अनैतिक कार्य नै हो । यसले देशका नेताहरू नै प्रचलित कानुनको ठाडो उल्लंघन गर्छन् भन्ने प्रस्ट पार्छ ।
प्रधानमन्त्री दाहाल २०६३ मंसिरमा बृहत् शान्ति सम्झौतापछि नै नेपाली राजनीतिक मूलधारमा सक्रिय छन् । तत्कालीन अवस्थामा विद्रोही शक्तिको नेताका रूपमा उनलाई विपक्षी दलका नेताले पाउनेसरहको सुविधा दिइयो । २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनपछि त दाहाल कहिले प्रधानमन्त्री र कहिले विपक्षी दलका नेता रहँदै आएका छन् ।
अर्थात्, उनले राज्यकोषबाट मासिक कम्तीमा ८० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म (औसतमा) बुझ्दै आएका छन् । दाहाल लाजिम्पाटस्थित १५ कोठे, कम्पाउन्डयुक्त आलिसान भवनमा भाडामा बस्दै आएका भनिए पनि त्यो भवनको भाडा कसले बुझ्ने गरेको, मासिक भाडा कति भएको भन्नेसमेत अहिलेसम्म औपचारिक जानकारी कतै खुलासा भएको छैन ।
कारोबार दैनिकमै प्रकाशित समाचारअनुसार तत्कालीन अवस्थामा उक्त घर ११ करोड रुपैयाँमा किनबेच गरिएको थियो । दाहाल मासिक १ लाख २५ हजार रुपैयाँका दरले भाडामा बसिएको भनिए पनि उक्त घरको बहाल कर दाखिला भए–नभएको समेत जानकारी कहीँ कसैबाट प्रवाहित भएको छैन ।
हाल प्रधानमन्त्री पदमा बहाल रहेका दाहाल त एक उदाहरणमात्र हुन् । अब अर्को पक्षमा जाऊँ, दाहालको प्रतिरक्षामा माओवादी कार्यकर्ताहरूले एमालेका नेताहरूको पनि सम्पत्तिको स्रोतमाथि प्रश्न उठाएका छन्, जसलाई नाजायज भन्न मिल्दैन । एमाले मात्र होइन, २०४६ सालपछि पटक–पटक सत्तामा बस्दै आएका कांग्रेस, राप्रपा र मधेसवादी दलका शीर्ष नेताहरूको वास्तविक सम्पत्तिको आधार र स्रोत के हो भन्ने विषय पनि यहाँनेर जोडिन्छ ।
एकपटक विचार गरौं, साधारण आयस्रोत भएका आमनेपालीले राजधानीमा जीवनयापन गर्न मासिक कम्तीमा ३०–३५ हजार रुपैयाँको लागत निस्कन्छ । यो अनुपातमा नेताहरूको वैभवशाली जीवन कसरी चलिरहेको छ भन्ने कुरामा गम्भीर प्रश्न उब्जन्छ ।
नियमित आयका स्रोत नहुँदा पनि राजधानीभित्र घर बनाउन सक्ने, कैयौं तोला सुन ‘दाइजो’ देखाउने हैसियतमा नेपालका नेताहरू कसरी पुगे भन्ने प्रश्नको जवाफ अनुत्तरित नै छ । आँप बेचेर, धान बेचेर सम्पत्ति जोडेको हास्यास्पद सम्पत्ति विवरण कसैले पत्याउँदैन ।
तत्कालीन विरोध वा समर्थनका कुरालाई अलग राखेर भन्ने हो भने नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दलहरू पारदर्शी छैनन् भन्ने कुरा ठोकुवाका साथ भन्नैपर्ने हुन्छ । राजनीतिक दलहरूले कहिल्यै आफ्नो आयव्ययको पारदर्शी विवरण सार्वजनिक गर्दैनन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी विद्यमान कानुनअनुसार निश्चित परिमाणभन्दा बढीको चन्दा लिइँदा, चन्दादाताको पूरै विवरण खोल्नुपर्ने व्यवस्था छ, तर दलहरूले त्यसको पालना गरेका छैनन् ।
साना–ठूला सबै दलले आफ्नो आयको मुख्य स्रोतका रूपमा अपारदर्शी चन्दा लिन्छन् । दल पारदर्शी नहुँदा त्यसका शीर्ष नेता पनि पारदर्शी छन् भन्ने आधार नै हुँदैन । प्रधानमन्त्री दाहालको सम्पत्ति विवरणमाथि प्रश्न उब्जेपछि कुनै बेला उनकै सारथि रहेका नयाँशक्ति पार्टीका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सम्पत्ति घोषणाको कर्मकाण्ड सट्टा एकपटक सबैलाई विधिवत् कालो धन सेतो गर्न दिएर पछि सम्पत्तिमाथि प्रगतिशील कर लगाउनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।
भट्टराई आफंै अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्ति हुन्, उनको अभिव्यक्तिले के साबित गर्छ भने नेपालका राजनीतिक चक्रमा दालमा निकै कालो छ । कालो धनलाई सेतो पार्ने अवसर दिनुपर्ने भट्टराईको भनाइमाथि सहमत भने हुन सकिँदैन । किनभने नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध अन्तरराष्ट्रिय महासन्धिमा हस्ताक्षर गरिसकेको, त्यसविरुद्धका कानुन र संयन्त्र बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको छुट ककसलाई दिने, उच्चस्तरका राजनीतिक नेतालाई मात्रै कि, प्रशासकहरूलाई समेत वा स्रोत नखुलीकन रातारात अर्बपति भएका नवधनाढ्यहरूलाई ?
प्रसिद्ध भनाइ नै छ— भर्‍याङ र भ्रष्टाचार माथिबाट सफाइ गर्र्नुपर्छ । केही समयअघि एक पूर्वप्रशासकले पंक्तिकारसँग भनेका थिए– “जस्तोसुकै स्वच्छ छविका प्रशासक सचिव बनोस्, उसलाई राजनीतिक व्यूहले सही ढंगले काम नै गर्न दिँदैन । राजनीतिक तहबाट आउने दबाबले नीतिगत भ्रष्टाचारमा प्रोत्साहित गर्छ ।”
त्यसको ठीक उल्टो, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरूको अभिव्यक्ति सुन्ने हो भने प्रशासनतन्त्रले आफूहरूलाई अनैतिक बाटोमा हिँड्न उत्प्रेरित गरेको बताउने गर्छन् । जुन ढंगले बुझे पनि माथिल्लो पंक्तिबाटै सुधारको खाँचो छ भन्ने कुरामा भने सबै सहमत छन् । यदि देशमा सही ढंगले सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने हो भने देशको राजनीतिक पंक्तिलाई पहिले स्वच्छ र पारदर्शी बनाउनैपर्छ । जब मुहान सफा हुन्छ, त्यसपछि खोला आफैं सङ्लिन्छ ।
वित्तीय सचेतना नेतालाई
सबैभन्दा उदेकलाग्दो पक्ष भनेको प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो कुनै पनि बैंक खाता नभएको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख गरेका छन् । दाहाल २०६३ सालमा भूमिगत जीवनबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा आएपछि कुनै न कुनै रूपमा राज्यबाट सुविधा लिँदै आएका छन् । २०५४ सालको संविधानसभा निर्वाचनपछि त व्यवस्थापिका संसद् सचिवालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट मासिक ८० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको तलबभत्ता बुझ्दै आएका छन् ।
देशका कार्यकारी प्रमुखका हैसियतबाट वा विपक्षी दलका हैसियतबाट दाहालले विगत नौ वर्षदेखि के ज्यालादारी मजदुरले जस्तो नगदमै तलबभत्ता बुझ्दै आएका छन् त ? यदि त्यसो हो भने नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूमा निकै न्यून मात्रै वित्तीय सचेतना रहेको प्रमाणित हुन्छ ।
यसअघि पूर्वप्रधानमन्त्री स्व. सुशील कोइरालाले पनि आफ्नो बैंक खाता नभएको उल्लेख गरेका थिए । त्यसको केही दिनभित्रै उनको ओछ्यानबाटै १२ लाख रुपैयाँ चोरी भएको समाचार आयो । चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा हरेक नेपालीको बैंक खाताको घोषणा गरिएको छ, त्यसको कार्यान्वयनका लागि केही दिनअघि अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सरकारी बैंकहरूलाई निर्देशनसमेत दिए ।
यदि अर्थमन्त्री महराले वा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले प्रधानमन्त्री दाहाल र उनका परिवारको बैंक खाता खुलाउन सके भने बजेटमा घोषणा गरिएको कार्यक्रमको सफलता त्यही हुनेछ ।
मन्त्रिपरिषद् नेपाल राष्ट्र बैंक सम्पत्ति विवरण भ्रष्टाचार निवारण ऐन– २०५९